Lungiselela ukubonakala kwesitolo sakho sohlelo lokusebenza lweselula nge-Mobile Action | Martech Zone
Lungiselela ukubonakala kwesitolo sakho sohlelo lokusebenza lweselula nge-Mobile Action
NgoLwesithathu, Juni 10, 2015 NgoLwesibili, ngoJuni 9, i-2015 Douglas Karr
Isenzo Seselula okwamanje isiza ngaphezu kwezinhlelo zokusebenza ezingama-70,000 ukuthola abasebenzisi ngokukhethwa kwamathuluzi wokutholwa komsebenzisi, ukuhlaziywa, nokuhlaziywa kokubikezela okusanda kukhishwa.
Inkampani yakhe ifayili le- Idatha enkulu injini enikeza onjiniyela bezinhlelo zokusebenza amaphuzu okubonakala afaka amaphuzu wedatha angaphezu kwezigidigidi eziyi-8, kufaka phakathi isigaba, indawo, isizini, imakethe, izimbangi, ukukhula okungokwemvelo / okukhokhelwayo, nokuningi. Ngokususelwe kulokhu kuhlaziywa okubanzi, i-Mobile Action yenza izincomo ezenzekayo zokuthi onjiniyela bangakhulisa kanjani ukubonakala kwezinhlelo zabo zokusebenza.
Umkhiqizo wayo ungasiza (futhi) usize abathuthukisi ngaphezu kokuphindwe kabili kokulanda kwabo okuphilayo ezinsukwini ezingama-30, kanye nokushaya amashadi aphezulu ayi-10. Ithuluzi libuye lenze ukubikezela okuhle kokusebenzisa ukusebenza kwe-App Store ngokunikeza abathuthukisi ucwaningo ngesikhathi esihle kakhulu sokwenza imikhankaso, ukuthi kwenzekani ngabancintisana nabo, nesikhathi esihle sokubuyekeza.
Injini inikeza ukuqonda kokushodayo kumasu okuthola abasebenzisi, izindlela ezinhle kakhulu, yiziphi iziteshi noma amathuluzi okufanele asetshenziswe, kanye nendlela ephumelela kakhulu yokwaba isabelomali. Iphinde yazise abathuthukisi ukuthi bazi umthelela izenzo zabo ezizoba nawo. Isibonelo, ukuthuthukisa igama elingukhiye le-X kuzonciphisa izindleko ezijwayelekile ngokufakwa ngakunye ngama-20%. Zonke izincomo ezizodwa zehlukile kuhlelo lokusebenza ngalunye.
Ukutholwa kohlelo lokusebenza kuphuke kakhulu futhi lokhu kuyinkinga enkulu emakethe, ngoba izinkampani azazi ukuthi zingabonakala kanjani izinhlelo zazo zokusebenza. Isenzo Seselula wenza ini I-ComScore ukwenzile, kepha ikakhulukazi izinhlelo zokusebenza, futhi kuba nomthelela omkhulu empumelelweni yabo. Akekho umuntu emakethe owenza lokhu esikwenzayo. Umsunguli we-Mobile Action u-Aykut Karaalioglu
Isenzo Seselula sinikeza Isitolo Sohlelo Lokusebenza esibanzi analytics nobuchwepheshe bokusebenzisa kahle. Izixazululo zayo zifaka i-App Store Optimization, Ncoma Izenzo, Ukuhlaziywa Kombono Wokuncintisana, kanye Nokuhlaziywa Kokubukeza. Ngokungeziwe ekulandeleni nasekuqondeni, i-Mobile Action isebenzisa ubuchwepheshe bokuqagela ukunikela ngezenzo ezinconyiwe zokuthi ungalufaka kanjani uhlelo lwakho lokusebenza phezulu.
Ukuzikhulula: Ngisebenzisa ikhodi yesimemo kulokhu okuthunyelwe. Uma nina bantu nibhalisa, ngithola nezinyanga zokusebenzisa mahhala kuhlelo lokusebenza.
Tags: isitolo sohlelo lokusebenzaukwenziwa kwesitolo sohlelo lokusebenzasimo sesitolo sohlelo lokusebenzaidatha enkuluizenzo zeselulaisitolo sohlelo lokusebenza lweselulaisitolo seselula
Ama-Benchmarks: Asebenza Kanjani Ama-Webinar Wakho?
Izimpephe: Ukuvela Kwezobuchwepheshe Bekhulu Elidala